အေးသိုလှောင်ခန်းအမြန်တံခါး, ရေခဲသေတ္တာ ROOM တွင်အစာရှောင်ခြင်းတံခါး, တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. ရေခဲသေတ္တာ ROOM တွင် insulator တွင်လည်းမြန်တံခါးကမ်းလှမ်းရန်
ဖေါ်ပြချက်:အေးသိုလှောင်ခန်းအမြန်တံခါး,ရေခဲသေတ္တာ ROOM တွင်အစာရှောင်ခြင်းတံခါး,ရေခဲသေတ္တာ ROOM တွင် insulator တွင်လည်းမြန်တံခါး,ထူသောကုလားကာအမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > အေးသိုလှောင်ခန်းအမြန်တံခါး
အေးသိုလှောင်ခန်းအမြန်တံခါး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, အေးသိုလှောင်ခန်းအမြန်တံခါး, ရေခဲသေတ္တာ ROOM တွင်အစာရှောင်ခြင်းတံခါး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ရေခဲသေတ္တာ ROOM တွင် insulator တွင်လည်းမြန်တံခါး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အအေးသိုလှောင်အစာရှောင်ခြင်း roller ရှပ်တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC မြန်နှုန်းမြင့်သည်အအေးသိုလှောင်သည့်တံခါးကိုဖွင့်သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသီးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လျင်မြန်စွာထည်အအေးသိုလှောင်မှုတံခါးကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်လျင်မြန်စွာအရေးယူအအေး roller ရှပ်တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစားအစာလုပ်ငန်းအတွက် PVC အအေးသိုလှောင်တံခါးအသစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်မြန်နှုန်းမြင့်အအေးသိုလှောင်စက်ရုံတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်ရုံစျေးနှုန်းအစာရှောင်ခြင်းအရေးယူမြန်နှုန်းမြင့် roller ရှပ်တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CE သည်သိုလှောင်ထားသောမြန်နှုန်းမြင့် roller ရှပ်တာကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်မှု PVC မြန်နှုန်းမြင့်အအေးသိုလှောင်မှုတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်မြန်နှုန်းမြင့်အအေးသိုလှောင်တံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက် PVC မြန်နှုန်းမြင့် roler ရှပ်တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CE အအေးသိုလှောင်မှုမြန်မြန်တံခါးကိုအတည်ပြုခဲ့သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစားအစာအတွက်လတ်ဆတ်တဲ့အအေးသိုလှောင်မှုမြန်နှုန်းမြင့်တံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC ကုလားကာအအေးသိုလှောင်စက် roller ရှပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အော်တိုအအေးသိုလှောင်တံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်တိုင်းကျ PVC ရေခဲသေတ္တာမြန်နှုန်းမြင့်ရှပ်တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စီးပွားဖြစ် refriogeration အအေးသိုလှောင်တံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသီးသိုလှောင်ရန်မြန်နှုန်းမြင့်ရေခဲသေတ္တာတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အထည်အလိပ်ကုလားကာမြန်နှုန်းမြင့်အအေးသိုလှောင်တံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC ထည်အမြန်အရေးယူအအေးသိုလှောင်မှုတံခါးကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစားအစာသိုလှောင်ရန်အအေးသိုလှောင်ခြင်းမြန်ဆန်သောလုပ်ဆောင်မှုတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview အအေးသိုလှောင်ခြင်းတံခါး (အအေးခံသိုလှောင်ရုံ၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး) သည်ပုံမှန်တံခါးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်သင်လျင်မြန်စွာတံခါးဖွင့်ထားရန်လိုသနည်း။ သင်၏စီးပွားရေး၊...
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview ဤစက်မှုတံခါးများ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာတိုက်မိပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ ဤအထူးအထူးမြန်နှုန်းမြင့် PVC တံခါးများသည်သင့်လုပ်ငန်းအတွက်သင့်တော်သည်။ လျှောက်လွှာများ:...
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview မြန်နှုန်းမြင့် PVC အအေးသိုလှောင်တံခါး၏ဘောင်သည်သွပ်ရည်စိမ်ထားသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်သံကိုအဓိကခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ လျှောက်လွှာများ: လေတိုက်နှုန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင်၊ အပူချိန်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊...
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview အအေးခန်းသိုလှောင်သည့်တံခါး (အအေးခံသိုလှောင်ရုံ၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး) သည်လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။...
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview အအေးခန်းသိုလှောင်တံခါး (အေးခဲနေသောဂိုဒေါင်တံခါး၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး) သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိအလိုအလျောက်တံခါးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းစံချိန်တွင်ဤပုံစံသည်ထိပ်ဆုံးအရောင်းတွင်ဖြစ်သည်။...
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview အေးဆေးသိုလှောင်သည့်တံခါး (အေးသိုလှောင်ထားသောတံခါး၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး)၊...
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview သင်၏စီးပွားရေးအတွက်သင်၏မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုလာယူပါ။ အအေးသိုလှောင်သည့်တံခါး (Chilled ဂိုဒေါင်တံခါး၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး) သည်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်သင့်တော်ရုံသာမကစူပါမားကက်၊ ဆေးဆိုင်၊ တံခါးဖွင့်ရန် /...
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောအရာသည်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အသက်၊ အချိန်သည်ငွေဖြစ်သည်။ အအေးသိုလှောင်သည့်တံခါး (ရေခဲသေတ္တာတွင်သိုလှောင်ထားသည့်တံခါး၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး) သည်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ခြင်း၊ ပို့ခြင်း၊...
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview အအေးခန်းသိုလှောင်သည့်တံခါး (အအေးခံသိုလှောင်ရုံ၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး) သည်စက်မှုလုပ်ငန်းထည်၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၊ သံမဏိ၊ ထိန်းချုပ်သေတ္တာနှင့် servo စနစ်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတံခါးဖြစ်သည်။...
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါစေသင်သွားရန်စီစဉ်ထားသည့်နေရာတိုင်းတွင်အအေးခန်းသိုလှောင်သည့်တံခါး (အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံ၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး) သည်သင်၏အနားတွင်အမြဲရှိနေသည်။...
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview မျက်မှောက်ခေတ်ဘဝ၌လူတိုင်းလျင်မြန်စွာရပ်တည်နေကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးသည်စောင့်ဆိုင်း။ မရပ်နိုင်။ လူအုပ်ကြီး၌သင်စောင့်နေသည့်အချိန်၊ တံခါး ၀ င်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။...
မြန်နှုန်းမြင့်မားသော တံခါးတိုင်ပုံ မျက်မှောက်ခေတ်ဘဝ၌လူတိုင်းလျင်မြန်စွာရပ်တည်နေကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးသည်စောင့်ဆိုင်း။ မရပ်နိုင်။ လူအုပ်ကြီး၌သင်စောင့်နေသည့်အချိန်၊ တံခါး ၀ င်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။...
မြန်နှုန်းမြင့်မားသော တံခါးတိုင်ပုံ သင်၏စက်ရုံ၊ စက်ရုံများ၊ စူပါမားကတ်များသို့အအေးသိုလှောင်ခန်း (အေးခဲနေသောဂိုဒေါင်တံခါး၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး) အချို့ကိုရှာနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဇစ် roller ရှပ်တာသည်သင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။...
မြန်နှုန်းမြင့်မားသော တံခါးတိုင်ပုံ အအေးသိုလှောင်ခြင်းတံခါး (အအေးခံသိုလှောင်ရုံ၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး) သည်ပုံမှန်တံခါးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်သင်လျင်မြန်စွာတံခါးဖွင့်ထားရန်လိုသနည်း။ သင်၏စီးပွားရေး၊...
မြန်နှုန်းမြင့်မားသော တံခါးတိုင်ပုံ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်အအေးခန်းတံခါး (အေးသိုလှောင်ထားသောတံခါး၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး) သည်နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ခြင်းတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ သံမဏိအမြန်မြန်မြန်သောတံခါးသည် ၁...
မြန်နှုန်းမြင့်မားသော တံခါးတိုင်ပုံ အအေးခန်းသိုလှောင်တံခါး (အအေးခံသိုလှောင်ရုံတံခါး၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါး) သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ သင်၏ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းတွင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။...
တရုတ်နိုင်ငံ အေးသိုလှောင်ခန်းအမြန်တံခါး ပေးသွင်း
အေးသိုလှောင်မှုအခန်းထဲမှာအစာရှောင်ခြင်းတံခါးကိုစက်မှုဇုန်ဂိုဒေါင် applications များရန်အသုံးပြုကြသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အအေးသိုလှောင်မှုတံခါးများချမ်းသိုလှောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများတောင်းဆိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ, ပရီမီယံပစ္စည်းများနှင့်ဒီဇိုင်း features တွေပေါင်းစပ်။ တစ်လျှော, လွှဲခြင်းနှင့်ဒေါင်လိုက်တံခါးကိုအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါ, အားလုံးအေးစောင့်တပ်ဖွဲ့တံခါးများ pultrusion မူဘောင်, extruded ပလပ်စတစ်ပေါ်လီမာ Case နှင့် Non-CFC foamed-in ကိုရာအရပျ polyurethane core ကိုအားဖြည့်မယ့်ခက်ခဲတဲ့နှင့်အပူကြားနေဖိုက်ဘာမှန်ထည့်သွင်း။ ကျနော်တို့အအေးသိုလှောင်မှုတံခါးများသည်းခံရပါမယ်သောအခြေအနေများနားလည်ပါတယ်။ သာလွန်ဒီဇိုင်းနည်းလမ်းများနှင့် Non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးပစ္စည်းများအေးစောင့်တပ်ဖွဲ့လာနှစ်ပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောကြည့်ရှုမည်ဆိုတာသေချာ!
Excellent ကလျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု Properties ကို
အေး ROOM တွင် options အမျိုးမျိုးကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးအခန်းထဲမှာပြား၏အရေးအပါဆုံးအကြိုးခံစားခှငျ့တစ်ခုမှာ passive အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အအေးအခန်းထဲမှာပြားသူတို့ကသာလွန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်လည်းခွင့်ပြုပါ, အလွန်ကျန်းမာရေးများမှာသာ။ သူတို့ရဲ့အနိမ့်တာမျိုးအရည်အသွေးတွေနဲ့တိုးမြှင်ငလျင်စွမ်းဆောင်ရည်အလုပ်မှာ you`re နေချိန်မှာသင်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
အေးသိုလှောင်ခန်းအမြန်တံခါး ရေခဲသေတ္တာ ROOM တွင်အစာရှောင်ခြင်းတံခါး ရေခဲသေတ္တာ ROOM တွင် insulator တွင်လည်းမြန်တံခါး ထူသောကုလားကာအမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး အေးသိုလှောင်မြန်တံခါး